Oghere: The Online Piracy Market | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 4, 2012 Bọchị Sọnde, Machị 4, 2012 Douglas Karr
Industrylọ ọrụ egwu na piraị, ụlọ ọrụ ihe nkiri na iyi, akwụkwọ akụkọ na akụkọ n'ịntanetị. Kedu ihe jikọrọ ihe ndị a niile? Tụkwasịnụ, ọchịchọ na ahịa na-agbanwe.
Abụ m nnukwu onye ofufe nke ikeketeorie na ịdabere nnọọ a libertarian n'akụkụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụdịdị dị iche iche. Ekwenyere m na ahịa ndị nweere onwe ha na-achọkarị ụzọ ziri ezi ịkwaga. Oge ọ bụla m hụrụ gọọmentị ka ha na-atụ mgboro nhịahụ, ịkesa faịlụ na ahịa m na-agba agba. Na oge ọ bụla m hụrụ gọọmentị na-agbachitere otu ụlọ ọrụ, m na-agbanyekwu ntakịrị. M wince n'ihi na m ekweghị na nwa ahịa ga-gburugburu ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na òtù monopolizing ha na ngwaahịa na na-agbachitere nnukwu uru ha.
Hasntanetị emeghewo ahịa na egwu ma jupụta ya. Mgbe m bụ nwata, amaghị m na e nwere ọtụtụ nde ndị na-ese ihe n’ụwa. Ọ bụ n'ọma ahịa ka naanị otu narị mmadụ ma ọ bụ puku kwuru puku nwere. Nye m, ọ bụ naanị Kiss. Ugbu a n'ahịa emeghewo, ọchịchọ a nọgidere otu ihe mana nke a ọkọnọ nọ ebe niile. Ọ bụ ihe dị otú o kwesịrị ịhụ na ọnụ ahịa egwu ga-agbadata ala ka nnweta ahụ na-arịwanye elu.
Ma ọ bụghị. Na ọnụahịa nke ọba agbanwebeghị afọ 25 n'agbanyeghị oke egwu egwu na ịdị mfe nke esi kesaa ya na webụ. Onweghi onye mere mkpesa mgbe ụlọ ọrụ egwu na-ere CD otu narị ugboro ego ha na-efu. Na, na kpakpando ihe nkiri, ndị na-egwu egwu na kpakpando na-egosi Bentleys ọhụrụ ha, ọ na-esiri m ike inwe ọmịiko na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ndị na-akwụwa aka ọtọ na-ekerịta egwu kama ịzụta ya, ọ pụtara na ọghọm nke ịnwụde karịrị ọnụ ahịa egwu a. Nsogbu a abụghị ndị na-akwụwa aka ọtọ, egwu, ma ọ bụ mbupu faịlụ… ọ bụ na ụlọ ọrụ egwu abụghị ihe ọ dịbu.
N'ime ime ụlọ m, enwere m HDTV yana igwe ụda gburugburu nke m nwere ike ịma jijiji n'ụlọ. Kedu ihe kpatara m ga-eji kwụọ ụgwọ maka tiketi ihe nkiri $ 12 na $ 10 popcorn na ihe ọ drinkụ drinkụ mgbe m nwere ike ịlele ihe nkiri maka ọnụọgụ ego na nkasi obi nke ọnụ ụlọ nke m? Enweghị m ike ịmakọ IMAX… Abụ m dị njikere ịkwụ ụgwọ maka ahụmịhe ahụ. Thelọ ọrụ ihe nkiri ahụ abụghị ọgụ dị n’etiti ndị na-apụnara mmadụ ihe nkiri na ihe nkiri sinima, ọ bụ ọgụ dị n’etiti ebe nkiri ụlọ na sinima nkiri. Na ihe nkiri ụlọ na-emeri!
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ihe nkiri ahụ nwere olile anya ịga nke ọma, ha ga-ewedata ọnụahịa nke ihe nkiri sinima na nri, tinye ụfọdụ okomoko ndị ọzọ (ikekwe nri abalị, mmanya na ụfọdụ cappuccino), ma tinye ụfọdụ oche okirikiri yana nkwụsị ka m wee mee ya abalị soro ndị enyi pụọ. Enweghị m ike ibudata nke ahụ ahụmahụ!
Agụọla m na akwụkwọ akụkọ na-agbali itinye mgbidi ụgwọ ọzọ. Echere m na anyị anọwo na nke a oge ole na ole… ma ha enwetaghị ya. Internetntanetị bụ ozi superhighway… akwụkwọ akụkọ bụ olulu. Akwụkwọ akụkọ na-eji ọdịnaya mejupụta oghere ndị ha na-enweghị ike irere mgbasa ozi na ọtụtụ ha ahapụla igwu ala iji chọta ezigbo akụkọ. Anaghị m akwụ ụgwọ maka akwụkwọ akụkọ n'ihi na m chọta ozi ka mma na ntanetị, na-esite na isi iyi ahụ, na-enweghị slant, na-enweghị mgbasa ozi na-agbanye ya.
O doro anya, enyere m ya .Bọchị niile.. Mgbalị nke ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ na-eweta enweghị ntụkwasị obi niile nke nnyefe akwụkwọ akụkọ na iPad. Ọ dị nwayọ, ọ na-ada, ọ na-abụkarị akụkọ. Ha kwesịrị ịkpọ ya Yesnyaahụ! Mana, ebe ọ bụ na akụkọ bụ ụlọ ọrụ dum, enwere n'ụzọ ụfọdụ ikike ha kwesịrị ha karịa oke nke ikeketeorụ na-enye ha ohere ịga n'ihu na-anwa ị nweta oke uru pasent 40? Ndo Akwụkwọ akụkọ ochieLaghachi na nnukwu akụkọ na ndị mmadụ ga-akwụ ụgwọ maka ọdịnaya ahụ.
N'okwu nke ọ bụla, anaghị m ata ụta onye na-azụ ya ma enwere m ọmịiko na ndị na-emebi iwu. E kwuwerị, nke a abụghị naanị isi obodo? Mgbe ọnụ ahịa karịrị ọchịchọ, naanị ihe fọdụrụ bụ ahịa ojii iji nweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Na nwute, ụlọ ọrụ ndị a toro oke ma sie ike na ha nwetara ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akpa azụ ha iji gbalịa ịkọwapụta iwu kwa izu iji gbalịa ịkwụsị ọbara ọgbụgba ahụ. Ndị be anyị… nke a abụghị nsogbu mpụ, ọ bụ okwu ahịa.
N'iburu okwu a, ị nwere ike iche na m bụ ihe gbasara ohi. Ọ dịghị ma ọlị! Enwere ọtụtụ imerime ngwaahịa na ọrụ ndị gbanwere. Ekwenyere m na ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ maka ọdịnaya karịa ka ha na-akwụ n'oge gara aga. Mgbe m bụ nwata, ndị mụrụ m nwere ekwentị, akwụkwọ akụkọ, telivishọn ojii na ọcha, ma kwụọ ụgwọ maka vinyl albums. Dị ka okenye, m na-akwụ ụgwọ maka smart phones, ozi olu, mobile ngwa, a data plan, a ederede ozi plan, (x ụmụ m 'atụmatụ) cable telivishọn, na ina fim, brọdband internet, XBox Live, iTunes na Netflix.
Ndị a abụghị ụfọdụ apụl ọjọọ ole na ole na-eme mpụ. Ohere inweta bụ, nkezi onye ị maara na-apụ apụ ma ọ bụ na-ekesa egwu ma ọ bụ ihe nkiri. Mgbe mpụ ahụ na-aga nke ọma, nsogbu ahụ abụghị mpụ… ị ga-amalite na-eche ihe adịghị mma na ahịa ahụ na-eweta ụdị omume ahụ.
Kpọchi nwa okorobịa na-emepụta netwọk ebe ndi mmadu na ekesa na nbudata abughi azịza ya. Anyị agabigala nke a site na Napster na Pirate Bay. Site na Megauploads gbadaa, puku saịtị ole na ole ndị ọzọ nọ ebe ahụ ga-enyere ọrụ ahụ aka. Ndị kachasị ọhụrụ bụ netwọkụ nzuzo nkeonwe nwere ọnụ ụzọ ámá na-enweghị aha na nkwukọrịta ezoro ezo ka gọọmentị enweghị ike ịtaba. Ohi ohi na izu ohi na egwu na ihe nkiri anaghị aga ebe ọ bụla.
Ike gwụrụ ụlọ ọrụ ndị a na-ekwupụta na ego furu efu ụlọ ọrụ dị na ọrịa [fanye]. Nke ahụ bụ ụgha ugha. Ndị mmadụ na-aga izu ohi ihe nkiri anaghị eme atụmatụ itinye ego na ụlọ ihe nkiri. Them tufuo ego site na ha izuru ya, ego efuru gị n'ihi na ị gbara ụgwọ nke ukwuu na ụlọ ihe nkiri na-agba gị aka.
Ma agwala m na ndị mmadụ agaghị akwụ ụgwọ maka ọdịnaya na naanị ihe anyị ga-eme bụ imechi onye ọ bụla. Anyị niile na-akwụ ụgwọ maka ọdịnaya kwa ụbọchị! Ọnụahịa ahụ ga-adaba na uru. Ndị folks na Ndepụta Angie egosipụtala na nke a… akwụ ụgwọ nyocha bụ ntụkwasị obi ma chekwaa ndị debanyere aha ha ọtụtụ puku dollar. Ndepụta Angie nwere njigide dị ukwuu na ndị ahịa ha ma bụrụ ndị ama ama na ha nwere ike ịga n'ihu ọha!
Ahịa na-agbanwe agbanwe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ anaghị adaba. Gini mere ha ji eme nke a dika okwu ojoo ma obughi nke aku na uba? Soro mgbalị nke nnukwu ụlọ ọrụ na-eme mpụ na ọnụọgụ weebụ site na ịgụ ihe ndị a Deeplinks blog na Electronic Frontier Foundation.
Tags: Ọrụ 1981kim dotcommegauploadsakwa nhichaokpupairetipaireti mmirinzuzousuna-ezu ohi
Ekwenyere m na gị: ụlọ ahịa ojii agaghị adị ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ndị otu na-echekwa ngwaahịa ha. Daalụ maka nnukwu ịgụ.
Okwu a anaghị apụ n'oge na-adịghị anya, na nwute, ụlọ ọrụ ndị ahụ na-achọ ihe ngwọta ọjọọ nọkwa na usoro ahụ na-emerụ okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na-eduga na mgbalị dị ka SOPA, ACTA, na ndị ọzọ. Doc Searls biputere ihe dị mkpa maka mkparịta ụka a, ọ bara uru ịgụ. http://blogs.law.harvard.edu/doc/2012/02/29/edging-toward-the-fully-licensed-world/
Ike gwụrụ ụlọ ọrụ ndị a na-ekwupụta na ego furu efu ụlọ ọrụ ahụ dị na ọrịa [fanye]. Nke ahụ bụ ụgha ugha. Ndị mmadụ na-aga izuru ihe nkiri anaghị eme atụmatụ itinye ego na ụlọ ihe nkiri ahụ. Them tufuo ego gị site na izu ya, ego funahụrụ gị n'ihi na ị gbara ụgwọ nke ukwuu na ụlọ ihe nkiri nke ụlọ na-agba gị aka. ”
Enweghị m ike ịkọwapụta ole m kwenyere na nkwupụta a! Ọ bụ eziokwu 100%.